Mandray Ny Anjarany Ny Zanaka Vavy Ao Amin’ity Fivarotana Vatomamy Mahazatra Ao Torkia Ity · Global Voices teny Malagasy
Mandray Ny Anjarany Ny Zanaka Vavy Ao Amin'ity Fivarotana Vatomamy Mahazatra Ao Torkia Ity
Voadika ny 07 Septambra 2016 4:30 GMT
Arzu mankao amin'ny fivarotana vatomamin'ny raibeny ao Istabul. Hiala amin'ny fomban-drazana mahazatra izy ary handray izany indray andro any. Sary: Christina Asquith/PRI
Ity lahatsoratra nosoratan'i Nihal Kayali ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 24 Aogositra 2016. Navoaka eto indray izany noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Raha resaka fanamboarana vatomamy Tiorka, mifikitra amin'ny fomban-drazana ny fianakaviana Altan
Nanomboka tamin'ny 1865, ny fivarotana vatomamy Atlan Sekerleme dia nivarotra vatomamy Tiorka vita tanana sy vatomamy mafy akide tao amin'ity fivarotana ity ihany izay mbola nitampify teny amin'ny arabe rarivato ao amin'ny faritra Kucukpazar ao Istanbul. Tafaroboka lalina tao anatin'ny fiainana ara-barotra an-jato taonany tao amin'ny renivohitra Ottoman taloha, nafindra tamin'ny raim-pianakaviana hatrany amin'ny zanany lahy nandritra ny taranaka efatra ny magazain'ny fianakaviana.
Saingy toa hiova izany fomban-drazana izany. Manan-janaka iray ny mpitantana ny Hakan Altan amin'izao fotoana izao: Arzu, zanaka vavy 27-taona. Injenieran'ny matematika manana mari-pahaizana momba ny fampandrosoana ny fandraharahana izy – tsy ny karazan'ny mpivarotra ao an-Tanàna Fahiny fahitanao ao izany.
Ao amin'ny tsena sy lalan-kely tranainy ao Istanbul, manohy mivarotra ny entan'izy ireo mandehandeha ny mpanao asa tanana, tahaka ny nataon'izy ireo tamin'ny vanim-potoana Ottoman, fony fihaonan-dalan'ny Lasoà i Istanbul tamin'izany. Amin'izao fotoana izao, nanome toerana ho an'ny mpizaha tany izay manampy manohana ny fahaizana asa tanana manoloana ny entana vokarina marobe ireo mpivarotra mandehandeha. Saingy nihazona ny fomban-drazana ny faharetan'ity varotra manan-tantara ity – mbola marobe kokoa ny lehilahy noho ny vehivavy eo amin'ny fiainana ara-barotra ao amin'ny Tanàna Tranainy.
Niatrika toe-tsaina nentim-paharazana eo amin'ireo mpivarotra vehivavy ao an-Tanàna Tranainy (Old City) i Arzu. “Mihevitra ny olona fa tsy dia maharaka vaovao noho ny lehilahy ny vehivavy,” hoy izy.
Tsy matoky ny toro-hevitrany ny mpanjifa. “‘Aiza ny rainao? Hanontany ny dadanao aho rehefa tonga izy: ‘”hoy ny fitakian'izy ireo.
Tsy mandroso i Torkia raha resaka fitondrana vehivavy any amin'ny toeram-piasana. Tamin'ny Tatitry ny 2015 Global Gender Gap (Elanelana Amin'ny Miralenta Manerantany), laharana faha 130 amin'ireo 145 i Torkia. Vehivavy Tiorka eo amin'ny 30 isan-jato eo ihany no miasa mandray karama, araka ny Fanadihadiana momba ny Asa An-tokantrano 2014 navoakan'ny TurkStat.
Saingy miditra an-tsehatra amin'ny fandraharahana ao Torkia ny vehivavy tahaka an'i Arzu. An'ny vehivavy ny 40 isan-jaton'ny orinsa salantsalany sy madinika ao Torkia araka ny filazan'ny International Finance Corporation ao amin'ny Banky Iraisam-pirenena. Amin'ireo vehivavy manana diplaoma tany amin'ny oniversite, 72 isan-jato no miasa.
Tsy miasa ao an-Tanàna Tranainy ny ankamaroan'ireo vehivavy manana diplaoma tany amin'ny oniversite ireo. Nilaza i Arzu fa mitady hihevitra ireo lehilahy mpivarotra ao an-Tanàna Tranainy fa tsy vonona hiasa “ara-batana na ara-tsaina” ny vehivavy. Ary satria tsy mikasa hiasa ao an-dakozia manamboatra zava-mamy i Arzu, mino izy fa tena sarobidy ny vehivavy satria misaintsaina fandraharahana madinika ny sain'izy ireo.
“Mora tohina kokoa ny vehivavy amin'ny mpanjifa, mora tohina kokoa amin'ny asa,” hoy izy. Miampanga ny lehilahy izay misalovana (manjakazaka) ny asan'izy ireo fa tsy mba mihevitra momba ny filan'ny mpanjifan'izy ireo. “Mihevitra amin'ny fomba mahitsy kokoa ny lehilahy, “Asako ity ary izaho no manao azy.'”
Nahazo tombony tamin'ny fanabeazana mampandroso i Arzu -nampirisika azy ny fianakaviany mba hanohy ny fianarana ambony ary hiasa amin'ny orinasa hafa mba hahazo traikefa amin'ny fandraharahana. Tatỳ aoriana, nilaza izy ireo, fa afaka miverina any amin'ny toeram-pivarotana vatomamy izy rehefa tonga ny anjarany.
“Rehefa miverina eto aho, dia mahatsiaro toy ny any an-trano” hoy i Arzu
Mbola tonga ao amin'ny toeram-pivarotana ny raibeny Abdullah Altan, 93 taona amin'izao fotoana izao na dia efa nanome ny orinasa ho an'ny zanany lahy Hakan aza. Abdullah dia eo akaiky eo foana ao anaty seza hazo ivelan'ny manoloana ny magazay, manjelatra ao am-baravarankely ao ambadikany ny vatomamy akide mamirapitratra.
“Voatery niala tamin'ny fianarana aho tamin'ny 1935, ary nanomboka niasa teto niaraka tamin'ny raibeko,” hoy izy nahatsiaro. Niasa tao amin'ny Altan Sekerleme nandritra ny 70 taona izy, ary niato efa-taona monja- mba hanatanteraka ny raharaha miaramila tsy maintsy atao.
Ho an'ny zanany lahy Hakan, mifandray betsaka amin'ny fomba fanao Ottoman ny varotra ataon'ny fianakaviana Altan. Manazava ny fomba nampangotrahan'ireo miaramila zazavao Ottoman, tafika amperora sangany ny akide tao anaty koveta varahina lehibe izy ary nanome izany ho an'ny Soltana rehefa faly amin'ny karamany izy ireo.
Rehefa mihena ny karama, te haka an-keriny ny lapa miaraka amin'ny vilanibe foana azy ireo ny miaramila zazazao. Ao Torkia, ny “fananganana vilanibe” dia midika fikomiana.
Tsy i Hakan ihany no nanangana vilanibe hanoherana ny fomban-drazana. Ara-bakiteny, nampiasa vilanibe varahana tahaka izany ihany koa ny fivarotana nandritra ny 80 taona.
Saingy manahy momba ny orinasan'ny vatomamy nentim-paharazana i Hakan. Amin'ny ankapobeny, mandeha ny varotra amin'ny fiafaran'ny Ramadan, rehefa manolotra fanomezana zava-mamy Tiorka sy akide ho an'ny namana sy havana ny fianakaviana. Nanamarika izy fa vitsy ny tinady ankehitriny raha oharina tamin'ny lasa.
“Zava-kanto Tiorka ny fanamboarana vatomamy, saingy tsy fantatra ny fomba hitohizany, amin'ny maha fomba amam-panao nentim-paharazana, satria na dia ny fomba fifandraisan'ny olona – sy ny fifanolorana fanomezana aza dia mihena,” hoy ny ahiahin'i Hakan.
Tsy lazaina intsony ny fahavoazan'ny orinasan'ny fizahan-tany ao Torkia. Noho ireo fanafihana fampihorohoroana marobe izay mikendry ny mpizahan-tany ao Istanbul tamin'ity taona ity, nihena ampahatelony ny vahiny mpitsidika an'i Torkia, araka ny filazan'ny minisiteran'ny Fizahantany. Vao mainka mety hampitombo ny olana ho an'ny mpivarotra ao an-Tanàna Tranainy ny fanonganam-panjakana feno herisetra sy ny korontana ara-politika taorian'izany tamin'ny volana Jolay.
“Raha oharina tamin'ny taona lasa, misy ny fihenana goavana teo amin'ny varotra,” hoy i Hakan miaiky. “Saingy hilamina tsara izahay, hamakivaky izany.”
Angamba tonga amin'ny ilàna azy ny fahaizan'i Arzu amin'ny fitantanana. Miaraka amin'ny mari-pahaizana momba ny fampandrosoana ny fandraharahana, mahatsiaro vonona i Arzu hanampy hampandroso ny orinasa. Milaza izy fa hiatrika ireo mpanjifa taranaka vaovao izay iray amin'ireo kinendriny ara-barotra voalohany.
“Matoky ny tsirairay fa afaka manao izany amin'ny taranaka fahadimy aho,” hoy izy. Ity no taranaka vehivavy voalohany!”
Ary ho an'ny raibeny Abdullah? Tsy manana ahiahy mikasika ny vehivavy mandray an-tanana ny taranaka manaraka izy.
“Eny tokoa, eny tokoa, eny tokoa mety hitranga izany. Eny tokoa! Nahoana mihitsy?”
Mpanao gazety miaraka amin'ny Tetikasa Fuller Misahana ny Fitateram-Baovao Iraisampirenena i Nihal Kayali.